Bravo: Sawirro Fiidiyooga Khadka Tooska ah | Martech Zone
Bravo: Khadka Video Testimonials ee khadka tooska ah
Thursday, April 26, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Meelo badan ayaa ka faa'iideysan doona markhaatiyada fiidiyowga ama sameynta bog ay macaamiisha ku duubi karaan farriin fiidiyoow shirkadda. Si kastaba ha noqotee, qabashada, soo-dejinta iyo martigelinta fiidiyowyadaas waxay noqon kartaa wax xanuun badan. Bravo waxay rajeyneysaa inaad taas ku bedesho adeegooda cusub, taasoo u oggolaaneysa macaamiishaadu inay wax ku duubaan iyaga oo adeegsanaya kamaradooda websaydhka ah isla markaana ay ku martigelinayaan bog degitaan u gaar ah adiga uun!
Waa kuwan muuqaalka guud ee adeegga:
Waa tan adeegga uu ku sharaxay barta Bravo:
Waxaan abuureynaa boggaaga degitaanka fiidiyowga ah - Shabakadeena Fiidiyowga ee sida fudud loo isticmaalo ayaa leh astaantaada waxayna u oggolaanaysaa dhagaystayaashaada inay ogaadaan waxaad jeclaan lahayd inay yiraahdaan.
Dhagaystayaashaadu waxay duubaan fiidiyowyadooda 30-sekan - Macaamiishaada ama rajadaadu waxay isla markiiba duubi karaan farriimahooda, faallooyinkooda ama su'aalahooda ilbiriqsiyo iyagoo isticmaalaya kamaradooda gaarka ah.
Arag oo la wadaag fiidiyahaaga meelkasta oo shabakada ah - Ku faafi saamayntaada cusub websaydhkaaga ama warbaahinta bulshada. Bravo waxay kuu oggolaaneysaa inaad bilowdo bani-aadminnimada websaydhkaaga, 30 sekan markiiba.
Tags: markhaatiyada macaamiishadib u eegis sheygafiidiyow adeegsade ah
Maxaad u garan weyday qofka aan ahay?
May 1, 2012 at 4: 36 AM
Noocyada noocan ah ee Faa'iidada leh
May 7, 2012 at 8: 29 PM
Waxay umuuqataa tartanka kujira markhaatiyada fiidiyowga macaamiisha inuu kululaanayo. Waxaan ka helay qoraal adeeg cusub, oo la yiraahdo Crowdrave oo bixisa adeeg la mid ah.